Xisaabinta iyo Hawlgallada Booster-PTO-PTA - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Naadiyada Booster / ururada waalidiinta ayaa ah qaybo lama huraan ka ah taageerida iyo xoojinta barnaamijyada iyo kooxaha ardayda ee Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale.
Ardayda waxaa la siiyay fursado badan oo gaar ah si ay u soo bandhigaan hibooyin iyo xirfado ka dhashay taageerada laga helay ka-go'naanshaha ururadan mutadawiciinta ah. Anigoo ku hadlaya magaca ardayda, macalimiinta iyo maamulka waxaan rabnaa inaan ku muujino qaddarinta iyo mahadnaqa. Mahadsanid!
Si loola socodsiiyo naadiyada waalidiinta / ururada waalidiinta, tilmaamaha soo socda ayaa la dejiyay. Tilmaamaha ayaa loola jeedaa
in laga caawiyo dhamaan ururada sidii ay ugu hogaansami lahaayeen shuruucda Federaalka / Gobolka ee khuseeya iyo siyaasadaha degmada dugsiga degmada.
Hay'ado gooni ah
Naadiyada Booster, Ururada Waalidka-Macallinka-Ardayda (PTO) iyo Ururada Waalidka-Macallinka (PTA) waa maamullo ka duwan degmada dugsiga. Waxaa caadi ahaan loo aasaasay inay yihiin ururo aan faa'iido doon ahayn. Sidan oo kale, ururadani waxay:
Hayso gole maamul u gaar ah
Joogteeyaan xisaabaadka maaliyadeed ee u gaarka ah iyo diiwaanada xisaabinta
Hayso koonto hubin gooni ah
Joogteeyaan nambarkooda aqoonsiga canshuurta federaalka
Dugsiga iyo / ama degmadu mas'uul kama aha ama mas'uul kama aha wixii qandaraasyo ah ee ay galaan ama kharashyada ay sameeyeen Booster Club ama Waalidka Macallinka Waalidka. Qandaraasyada dhacdooyinka dugsigu kafaalo qaado waa in laga baaraandegaa xafiiska guud ee dugsiga. Xafiiska dugsiga
ka dibna u gudbin doonaa Xafiiska Ganacsiga si ay u saxiixaan.
Tusaalaha Dhacdooyinka Iskuulka ee Iskuulka: Prom
Tusaalaha Dhacdooyinka Aan Dugsi Laheyn ee La Kafaala qaaday: Xisbiga Sare
Tilmaamaha Maaliyadeed / Xisaabinta
Urur kastaa waa inuu hayaa macluumaadka la xidhiidha dhaq-dhaqaaqiisa dhaqaale. Macluumaadkan waxaa ka mid ah:
Duubista dhammaan rasiidhada ururka, qadarka iyo isha
Duubista dhammaan kharashyada ururka ujeeddo iyo lacag-bixiyaha
Kharashaadku waa inay ahaadaan walxaha loo arko inay lagama maarmaan u yihiin howlaha ururinta ee ururinta iyo maamulka ururka. Kharashaadka la xiriira iskuulka degmada waa in loo diraa degmada si tabarruc ah oo ay u aqbalaan Guddiga Dugsiga iyadoo loo marayo siyaasadda hadiyadda. Tan waxaa iskuduwaya iyada oo loo marayo Xafiiska Maamulaha ama Xafiiska Ciyaaraha. Tusaalooyinka: Qorsheeyeyaasha maalinlaha ah, qalabka ciyaarta, labiska, gaadiidka basaska ee safarada dibadda, iwm.
Bilaabida iyo dhammeynta hubinta xisaabaha
Jeegaga waa in ay ansaxiyaan ugu yaraan laba xubnood oo ururka ka tirsan
Shaqalaha degmo dugsiyeedku waa inaysan lahaanin kantaroolid maaliyadeed oo dhammaystiran hay'adda ama inay noqdaan saxiix kujira koontada
Ururrada hubinta buuggu waa inaan lagu xareynin dhismaha degmada dugsiga. Abaabulku ma isticmaali karo heerka cashuur dhaafka ee degmadda.
Soo-jeedin - Madaxweynaha ayaa boosta loogu soo diraa bayaanka bangiga si dib loogu eego loona gudbiyo Khasnajiga si loo dheellitiro loona sameeyo warbixin si ay u ansixiyaan ururku.
Tilmaamaha / Kheyraadka Kale
Dugsiga Degmada Robbinsdale wuxuu qaadaa caymis si loo daboolo khataro badan oo kala duwan. Caymiska waxaa ku jira hanti, dambi, baabuur iyo mas'uuliyad.
Haddii nashaadaadku tahay dhacdo iskuulku maalgeliyey degmadu waxay leedahay caymis, Tusaale: Balanqaad Sare
Haddii waxqabadku yahay munaasabad aan iskuulku soo qabanqaabin, hay'adda howsha wadaysaa waa inay yeelataa siyaasad gaar ah oo lagu ilaalinayo ururka iyo xubnaheeda. Tusaale: Xisbi Sare
Haddii ururku yahay urur 501c3 ah jagooyinka la doortay laguma daboolayo siyaasadda degmada. Sharciga gobolku wuxuu u baahan yahay hantida ugu yar iyo caymiska mas'uuliyadda ee 1.5 milyan.
Siyaasadda Hadiyadaha Degmada
Waa siyaasada ISD # 281, in dhamaan hadiyadaha, dardaaranka iyo deeqaha ay hesho degmadu, si rasmi ah ayaa loo soo bandhigi doonaa hadii ay aqbalaan gudiga iskuulka, ka dib ayaa lagu dabaqi doonaa ujeedada ama ujeedooyinka uu qeexay deeq bixiyuhu. Qalabku wuxuu noqdaa hantida Degmada Dugsi. Gudiga iskuulku qiimo ma saari doono hadiyadaha aan lacagta ahayn.
Safarada / Safarada Goobta
Safarada iskuulku kafaalo qaado guud ahaan waxay ubaahanyihiin isticmaalka gawaarida iskuulku bixiyo, sida basaska ama basaska rakaabka. Gawaaridan ayaa kala ah
oo ay ka shaqeeyaan shaqaalaha iskuulka ama qandaraaslayaashu. Dhammaan wadayaasha degmada waxay ku xiran yihiin baaritaanka MVR asalka iyo ceymiska degmada ayaa loo fidiyay darawaladan.
Shaqaalaha Dugsiga Degmadu ma diyaarin karaan isku-uruurinta baabuurta sababo la xiriira mas'uuliyadda awgeed (tusaale ahaan, baaritaanka taariikhda, caymiska ugu yar). Degmadu mas'uul kama aha gaadiid geynta dhacdooyinka aan dugsigu kafaala qaadin.
Mararka qaar urur ayaa ka iibsan doona degmada adeegyo ama agab. Haddii ay khuseyso degmadu waxay soo diri doontaa
abaabul qaansheegad adeegyadan ama alaabtan. Tusaale: Waaxda Daabacaadda. Qandaraasyada wax iibsiga ee Degmooyinka hadda jira ayaa lagu sharfi doonaa dhammaan macaamillada ay la sameeyaan urur. Tusaale: Iibsiga Dharka, Qalabka Ciyaaraha, iwm.
Waqtigaan Dugsiga Degmadu wuxuu qandaraas kula jiraa Coca-Cola. Dhammaan iibsiyada cabitaanka jilicsan waa inay ahaadaan wax soo saarka Coke oo laga iibsado iyada oo loo marayo shirkadda 'Coke distributor'. Fadlan la tasho Agaasimaha Waxqabadka ee dugsigaaga.
Fadlan ka eeg bogga Isticmaalka Xarunta ee boggayaga internetka wixii macluumaad dheeraad ah.
Si loo go'aamiyo nidaamka ku habboon ee loo codsado adeegsiga qalabka dugsiga, wac xoghayaha dugsiga oo u sharax baahiyahaaga. Iskuulka
xoghayaha ayaa go'aamin doona in codsiga uu jadwalka ka bixin doono dhismaha iskuulka ama loo gudbin doono jadwalka howlaha, Jennifer
Bridgeman. Ms. Bridgeman waxaa lagala xiriiri karaa 763-504-4917 ama Jennifer_Bridgeman@rdale.org . Lacag-bixinnada Mas'uuliyiinta ama Adeegyada Nafaqada ayaa codsan kara.
Adeegsiga Jikada Degmada
Carnivals, Pancake Breakfasts, Spaghetti Casho ama shaqo kasta oo lagu casuumayo dadweynaha waxay u baahan tahay in la adeegsado laysanka socdaalka
ilaa degmada Hennepin. Xiriiriyaha foomka ayaa ku qoran bogga xarumaha. Qalab kasta oo wax lagu kariyo ama wax lagu karsado sida griddles wuxuu u baahan yahay oggolaansho Fire Marshall.
Kaydinta cuntada ee ururada aan ahayn Adeegyada Nafaqada looma oggola koodhka cuntada ee MN. Adeegyada nafaqada waxay la shaqeeyaan
dhacdooyinka dugsiga sida xafladaha, dhammaan xafladaha dugsiga, iwm si loo keydiyo cuntada maalinta dhacdada. Dhammaan cuntada waa in laga saaraa dhammaadka dhacdada. Karinta guryaha degmada waxaa loo oggol yahay oo keliya munaasabadaha ay maalgeliso degmadu.
Waxyaalaha iibinta dubista waa inay ku taxan yihiin dhammaan xasaasiyadda ku jirta badeecada. Caymiska degmada ma daboolayo alaabada iibinta dubista.
Buugga Xisaabinta iyo Hawlgallada ee Naadiyada xoojiya, PTO iyo PTA
Ururada Ka Baxsan - Naadiyada Kordhinta / PTO / PTA
Ogeysiin Loo Baahan Yahay Degmada
Shuruudaha Isku Xidhka
Nidaamyada lagu taliyay
Naadiyada Soo Kordhinta iyo Ururada Waalidka-Macallinka ama Ururada waa ururo ka kala duwan degmada dugsiga. Sidan oo kale, waxay leeyihiin nambarkooda aqoonsiga canshuuraha federaalka, guddi maamul oo madax-bannaan, dejiya siyaasaddooda u gaarka ah isla markaana ilaaliya diiwaanno xisaabeed u gaar ah. Waxay sidoo kale hayaan koonto hubin oo gooni ah. Ujeeddooyinka lacag ururinta, ururradan waxaa loo sameeyay sidii hay'ado aan faa'iido doon ahayn oo ay tahay in la diiwaangaliyo oo ay raacaan xeerarka federaalka iyo gobolka si loo ilaaliyo heerarka ka dhaafitaankooda. Hay'adahani WAA INAY ka faa'iidaysan ama isticmaalin lambarka aqoonsiga cashuurta degmada.
Ururadan qiimaha leh waxay bixiyaan ilo dhaqaale oo looga baahan yahay howlaha iskuulka. Si kastaba ha noqotee, kala soocida ururadan iyo degmo dugsiyeedka waa in la ilaaliyaa si aan qolo saddexaad loogu marin habaabinin inay aaminaan in ururku ka tirsan yahay dugsiga degmada. Waa lagama maarmaan in habdhaqan xisaabeed adag oo sax ah la raaco si loo hubiyo kala soociddan.
Ururradan waxaa abuuray kooxo qaan-gaar ah oo daneynaya waxaana maamula dadka waaweyn oo leh dad waaweyn oo kala duwan saraakiil ahaan. Waxay ku ururiyaan lacag iyagoo u maraya munaasabadaha lacag ururinta, bixinta lacagaha laga helo xubnaha qaangaarka ah ama tabarucaadka hay'adaha kale. Waxay ku shaqeyn karaan tanaasul dhacdooyinka gaarka ah iyo mashaariicda kale ee dhismaha dugsiga iyadoo laga caawinayo ardayda ogolaanshaha guddiga hore. Xaaladaha oo dhan, dadka waaweyn waxay hirgeliyaan, kormeeraan oo xakameeyaan nashaadaadka. Xubnaha qaangaarka ah ee ururka ayaa sameeya go'aamada.
Magacyada saraakiisha ururada iyo macluumaadka xiriirka oo ay ka mid yihiin: cinwaanada guriga iyo emaylka iyo lambarka taleefanka hadda waa in loo gudbiyaa xafiiska dugsiga bilowga sannad dugsiyeed kasta iyo / ama marka uu isbeddel ku yimaad saraakiisha
Magaca hay'ad maaliyadeed oo ururku ku hayo akoonkeeda hubinta
Magacyada iyo macluumaadka xiriirka saxeexayaasha hay'adda
Tilmaamaha soo socdaa waxay xaqiijinayaan iskaashi shaqo oo weyn oo udhaxeeya degmada iyo naadiyada kobcinta, PTA, iyo ururada PTO
Dakhliga ururku waa inuusan ka imaan ardayda. Uruurinta khidmadaha ama khidmadaha kale ee ardayda waxay ka dhigeysaa ururku mid u eg urur arday oo degmadu ansaxisay
Ururada sameeya munaasabadaha aan iskuulada la kafaala qaadin waa inay lahaadaan caymisyo cayiman oo gooni ah si loo ilaaliyo ururka iyo xubnahooda
Adeegsiga jikada degmada waxaa lagu sameyn doonaa isku dubaridka waaxda nafaqada caruurta si loo hubiyo u hogaansanaanta xeerka cuntada ee Minnesota iyo hab maamuuska shatiga ee degmada Hennepin
Isticmaalka qalabka degmada waxaa lagu sameyn doonaa isuduwidda xoghayaha dugsiga halka munaasabadda lagu qaban doono. Fadlan la soco in codsiyada qaarkood loo gudbin karo jadwalka qalabka
Tilmaamaha soo socda ee maaraynta iyo xisaabinta ayaa lagula talinayaa naadiyada kobcinta iyo ururada waalidiinta-macallimiinta ama ururada
Macluumaadka la xiriira howlaha dhaqaale ee ururka waa in lagu hayaa qaab abaabulan oo si fudud loo heli karo. Macluumaadkan waa inuu kujiraa rasiidhada, isha rasiidhada, kharashaadka oo ay kujiraan macluumaadka lacag qaataha iyo sharaxaada iibka ama adeega la bixiyay, iyo bilaabida iyo dhamaadka isu dheelitirka.
Kharashaadka waa in loo arkaa inay lagama maarmaan u yihiin howlaha ururinta ururinta iyo maamulka ururka. Majiro qarashyo laxiriira dagmada oo si toos ah ay u iibsan karaan ururadan. Degmadu waxay samayn doontaa wax iibsi toos ah waxayna kahelaysaa tabarucaadka iibsiga ururka doonaya inuu kabo kharashka. Kharashaadka ku baxa qalabka degmada dugsiga, gunnada shaqaalaha degmada, mushaharka tababarayaasha, safarada dibada, kirada qalabka carnival, bixinta safarada basaska ayaa ah tusaalooyinka kharashyada ee ayna ahayn inay si toos ah ururadan u qabtaan.
Jeegaga waa in ay ansaxiyaan ugu yaraan laba xubnood oo ururka ka tirsan. In kasta oo shaqaalaha degmadu ay xubno ka noqon karaan ururradan, haddana waa inaanay sumcad ku yeelan xisaabaadka bangiga PTA / PTO / Booster Club. Buugga hubinta ee hay'adaha ama lacagaha waa in aan lagu xareynin hantida degmada dugsiga ama waa inaysan ku jirin gacanta degmo shaqaale
Mar kasta oo ay dhaqan gasho, ururku waa inuu dejiyaa kala-soocidda waajibaadka oo ah qaab lagu taageerayo saraakiisheeda. Kala soociddani waxay keeni kartaa waxyaabaha soo socda:
Sarkaal loo qoondeeyey, oo aan ka ahayn qasnajiga waa inuu bilaabo oo saxeexaa qaansheegad kasta ama codsi lacag bixin ah
Bayaanka bangiga waa in loo diraa madaxweynaha ururka loona gudbiyaa qasnajiga si uu u heshiiyo uguna sameeyo warbixino xubinta ama kooxda hogaaminta
Dhamaan howlaha aruurinta iyo tabarucaadka waa in ay ka ansixiyaan xubinimada ama kooxda hogaaminta
Khasnajiga ama buug-hayuhu waa inuu u diyaariyaa warbixin-sannadeed maaliyadeed xubinnimada. Warbixintani waa inay kujirtaa bilowga iyo dhamaadka dheelitirka xisaabaadka hay'adda, koontada jeegga dhammaadka iyo isku dheelitirka maalgashiga, wadarta guud ee rasiidhada bixiyaha, liistada lacag-bixinta ee iibiyaha, oo leh cadadka iyo ujeeddada kharashka
Haddii ururku shaqaaleeyo shaqaalaheeda ama qandaraaska adeegyada dibedda, ururku wuxuu mas'uul ka yahay soo gudbinta foomamka dhammaadka sannadka ee ay ku jiraan foomamka W-2 ama 1099. Duruufo la'aan waa in ururku si toos ah qandaraas u siiyo ama u bixiyo lacag bixinta adeegyada shaqaalaha degmada. In sidaa la yeelo waajibaadka canshuuraha, nidaamka oggolaanshaha qandaraaska degmada, iyo mas'uuliyadaha dadaalka hay'adda.
Ururradu waa inay la tashadaan shirkad CPA ah oo aqoon u leh shuruudaha warbixinta hay'adaha aan macaash doonka ahayn si loo hubiyo u hoggaansanaanta shuruudaha warbixinta federaalka iyo gobolka. Tani waxay u oggolaaneysaa ururka inuu ilaaliyo xaaladdiisa cashuur dhaafka ah wuxuuna ka ilaaliyaa saraakiisheeda iyo xubnaheeda deymaha.
Degmadu waxay bixisaa tilmaamaha iyo talooyinka kor lagu soo bandhigay oo ah waddo lagu taageero maamulka ururka. Urur kastaa wuxuu lahaan karaa habab kale marka lagu daro kuwa kor lagu soo sheegay. Waxaan soo dhawaynaynaa faallooyinkaaga, su'aalahaaga, ama ra'yi-celintaada ku aaddan daba-galka iskaashi adag oo faa'iido u leh barteenna.
Soo Degso Buuggan (PDF)